Sanadihii la soo dhaafay, saynisyahan qalab ayaa soo saaray nooc cusub oo ah nooca 312 ee dhoobada dhoobada ah, qaaciddada guud ee M3XZ2, iyaga ka mid ah, M waa mid ama dhowr ka mid ah walxaha biraha kala guurka ah (sida Ti, V), X waa mid ama ka badan oo ka mid ah qaybaha muhiimka ah ee soo socda, tiro ka mid ah III, cunsurrada kooxda koowaad (sida Al Ge Si), Z waa mid ama dhowr waxyaalood oo aan birta ahayn (sida CNB, iwm),
Sanadihii la soo dhaafay, saynisyahan qalab ayaa soo saaray nooc cusub oo ah nooca 312 ee dhoobada dhoobada ah, qaaciddada guud ee M3XZ2, iyaga ka mid ah, M waa mid ama dhowr ka mid ah walxaha biraha kala guurka ah (sida Ti, V), X waa mid ama ka badan qayb ka mid ah kooxda koowaad ee soo socota, tiro ka mid ah III, cunsurrada kooxda koowaad (sida Al Ge Si), Z waa mid ama dhowr waxyaalood oo aan birta ahayn (sida CNB, iwm.), Waxaa jira 312 jinsi oo daraasadda ternary ah Isku-darka Ti3SiC2 ugu weyn Ti3AlC2 Ti3GeC2 waxay leeyihiin qaab-dhismeed isku mid ah, isku mid ah / kooxda boos ee MMC Wakiilka caadiga ah ee xeryahooda waa waxa Ti3SiC2 lagu dhejiyay Ti3SiC2 dhoobada dhoobada ah Titanium silicon carbide Ti3SiC2 (Titanium silicon carbide) waa nooc ka mid ah dhoobada isku dhafan waxqabadka caabbinta u adkeysiga qandhada qandhada sare ee xoogga sare, iyo qalabka birta ah sida mashiinka tabinta ee kuleylka kuleylka iyo fursadda horumarinta qalabka balaastigga 1980-kii, qiyaas ahaan dariiqa degdegga ah Ujeedada wakiilka xoojinta sida fibreerka, dhogorta iyo duulista oo aad uga qiimo badan shuruudaha mishiinka, iskudhafka matrixka dhoobada ayaa noqda barta ugu kulul ee cilmi baarista Fibreerka, whisker wuxuu xoojiyay adkeysigiisa waa la hagaajiyay, laakiin sababtoo ah diyaarinta kharashka badan iyo kalsoonida liidata , wali way adagtahay in la dalbado si loo xaliyo dhibaatadan cilmi baarayaashu waxay bilaabeen inay sahamiyaan dabeecadda labadaba birta iyo dhoobada shey ee heerkulka sare, ugu dambeyntiina laga helay nidaamka Ti-Si - C a titanium silicon carbide Ti3SiC2 (Ti3SiC2) waxay leedahay labada astaamood bir ah heerkulka qolka leh kuleylka wanaagsan ee kuleylka iyo kuleylka korantada, qallafsanaan yar oo adag iyo qalab sare oo dabacsan; Ductile heerkulka qolka, waxaa loo shaqeyn karaa sida bir, iyo caag ah heerkulka sare; Isla mar ahaantaana, waxay leedahay astaamo ee qalabka dhoobada, xoog dhalidda sare, barta dhalaalaysa sare, xasiloonida kuleylka sare iyo caabbinta qiiqa wanaagsan. Waxay ku hayn kartaa awood sare heerkulka sare. Maxay ka muhiimsan tahay in ay leedahay isku dheelitirnaan khilaaf iyo waxqabad is-saliidayn ka wanaagsan saliidda adag ee soo jireenka ah.
Horaantii bishii Diseembar 2005, Wasaaradda Sayniska iyo Teknolojiyada ee dalkeenna waxay soo saartay firfircooni leh: mid leh xuquuq madax-bannaan oo aqooneed, Ti3SiC2 wax soosaarka dhoobada ee jiilka cusub ee xawaaraha sare ee tareenka xawaaraha sare ee barnaamijka 863 qaranka. , Mawduucyo farsamo qaab dhismeed heer sare ah, gudaha lagu horumariyey iyadoo laga maalgelinayo mashruuca si loo guda galo unugga jaamacadda Beijing jiaotong ka dib laba sano oo isku xigta oo lagu guuleysto nadiifinta sare ee Ti3SiC2, Ti3AlC2, Ti2SnC tiknoolajiyada farsamooyinka badan ee dhoobada dhoobada ah, habka wax soo saarka skateboard, si loo dhammaystiro barashada astaamaha jirka iyo kiimikada, skateboarding loading loading orodka. Tiyeetooyinka taxanaha ah ee Ti3SiC2 ee dhoobada dhoobada ah ee ay si guul leh u soo saareen kooxdan cilmi baarista ah waxaa lagu muujiyey hanaan sare, iska caabin saameyn leh, iska caabin abrasion, iska caabin abc, xoqitaan hoose ee siligga xiriirka, iwm. boodhadhka birta metallurgy skate loo isticmaalo gudaha iyo dibedda, fududahay in la jebiyo, iyo dhaawac weyn oo siligga xiriiriyaha. Ti3SiC2 skateboards dhoobada ayaa si guul leh loo soo saaray sanadkaas waxay door muhiim ah ka ciyaartay horumarinta tareenka xawaaraha sare ku socda ee Shiinaha. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee Ti3SiC2 ee alaabada dhoobada ah
Ti3SiC2 wuxuu isku daraa sifooyinka dhoobada iyo birta. Qalabkeeda sare ee laastikada, barta dhalaalaysa sare iyo xasiloonida heerkulka sare waxay muujineysaa sifooyinka dhoobada oo kale Dhaqdhaqaaqa sare, qaab dhismeedka laastikada sare, barta dhalaalaysa sare iyo xasiloonida heerkulka sare ayaa ka tarjumaya waxyaabaha la midka ah ee dhoobada.
Shaxda 1. Waxyaabaha ugu Muhiimsan ee dhoobada Ti3SiC2 (Heerkulka qolka)
Daraasado ku saabsan caabbinta waxyeellada ee Ti3SiC2 waxay muujineysaa inuu jiro waxyeello weyn oo been abuur ah
aagga hoosta galka Ti3SiC2. Sababta ayaa ah in Ti3SiC2 ay leedahay farsamooyin fara badan oo nuugista tamarta inta lagu jiro dhaawaca xiriirka, sida microcrack faafinta, leexashada dillaac, hadhuudhka la soo baxo, leexashada hadhuudhka, iwm. Intaa waxaa sii dheer, waxyaabaha noocan ahi waxay leeyihiin is-saliidayn wanaagsan. Waxyaabaha noocan ahi waxay leeyihiin rajo ballaadhan oo codsi ah sida qaab-dhismeedka heerkulka sarreeya, qalabka burushka korontada ku shaqeeya, maaddada is-saliidda, qalabka is-weydaarsiga kulaylka iyo wixii la mid ah. Si kastaba ha noqotee, adkeysiga hooseeya, xirnaanta iska caabinta iyo u adkeysiga qiiqa ee walxaha dhoobada ayaa xaddidaya codsigeeda munaasabadaha xasaasiga ah sida caabbinta daalka, xirashada caabbinta iyo u adkeysiga qiiqa. Codsiga alaabada dhoobada ah ee Ti3SiC2
(I) Codsiyada biomedical
Takhtarka ilkaha, walxaha ama waxyaabaha loo isticmaalo deegaanka afka waxaa looga baahan yahay inay ahaadaan kuwo xasilloon oo la shaqeyn karo muddo dheer sababtoo ah qiiqa. Ti3SiC2 waxay leedahay sifooyin dhoobada iyo birta ah iyo isku-xirnaansho wanaagsan, taasoo suurtagal ka dhigaysa in loo isticmaalo jirka bini'aadamka. Ti3SiC2 waxaa looga baaraandegi karaa dunta cabirkeedu yahay mid sax ah oo aan lahayn saliid, sidaa darteed waxaa laga dhigi karaa mid la geliyo ama loo adeegsado daawada loogu talagalay isticmaalka kiliinikada ee stomatology. Qaybta laastikada ee Ti3SiC2 waxay kudhowdahay dhaldhalaalka ama dentin marka loo eego zirconia (1.9 × 105MPa), taas oo kordhinaysa suurtagalnimada codsigooda si loogu dhajiyo ama loo dhigo dhoobada gudaha ka samaysan Qalabka Ti3SiC2 ee laga soo qaatay qalabka is-isu-faafinaya maaddada kuleylka sare waxay ka kooban yihiin unugyo diiran oo laga yaabo inay fududdahay abaabuliddooda iyo isku xirnaantooda. Isuduwaha hooseeya ee khilaafku wuxuu suurtogal ka dhigayaa in lagu dabaqo orthodontics si loo kordhiyo siibashada oo loo yareeyo iska caabinta khilaafaadka.
Caabbinta daxalka iyo u adkaysiga qiiqa ayaa ah shuruudo muhiim u ah adeegsiga maaddadan deegaanka afka iyo xasilloonidiisa. Qalabkan iyo budada dhoobada ayaa labadaba ah qalabka dhoobada, iyo shahaadadooda ku xirnaanta ayaa ka fiicnaan karta tan birta iyo tan galleyda ah. Sidaa darteed, baaxadda dalabka maaddadani waxay u ballaadhan tahay taajka dhoobada gudaha.
Si kastaba ha noqotee, habka hadda loo yaqaan habka diyaarinta ee Ti3SiC2, habka diyaarinta waa in la hagaajiyaa si loo helo saafiyo Ti3SiC2 saafi ah, si loo fahmo sifooyin badan oo saxan oo ah maaddada. Sheybaar dheeri ah iyo daraasado caafimaad ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo isku xirnaanshaha iyo ku shaqeynta maaddada.
(2) codsiyada ku jira qalabka diidmada Iyadoo la adeegsanayo faafinta tiknoolajiyada degdegga ah ee warshadaha dhoobada, wareegga isticmaalka alaabta guryaha lagu dhaqo ayaa gaagaaban oo xaaladaha adeegsiga ayaa aad u adag. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in si isdaba-joog ah loo hagaajiyo caabbinta shoogga kuleylka ah ee qalabka alaabta guryaha lagu karsado si loo daboolo baahiyaha horumarineed ee tiknoolajiyada toogashada degdegga ah ee warshadaha dhoobada.
Maaddaama ay tahay nooc ka mid ah diidmada fasalka sare, qalabka guryaha lagu karsado ayaa saameyn muhiim ah ku leh tayada alaabada la eryay. Ti3SiC2 dhoobada ayaan u nugul naxdinta kuleylka, qaab-dhismeedkooda lakabka gaarka ah iyo habdhaqanka caagga ah ee heerkulka sare ayaa yareyn kara saameynta diiqada kuleylka.
Waxyaabaha loo maro △ T = 1400 strength xoog ka hadhay kuleylka ayaa wali ka sarreeya 300MPa, waxqabadka caabbinta shoogga kuleylka ee ugu fiican wuxuu u adkeysan karaa 900 900 kala duwanaanta heerkulka. Isla mar ahaantaana, Ti3SiC2 dhoobada ayaa leh faa'iidooyinka iska caabbinta kiimikada ee wanaagsan, ka shaqeynta fudud iyo qaraabada qaraabada ah ee alaabta ceeriin, taasoo ka dhigeysa alaabta guryaha lagu karsado ee habboon in la soo saaro.
Hore: Titanium Stannum carbide, Ti2SnC
Xiga: Aluminium vanadium Carbide, V2AlC